Waa maxay sababta ay SD u necebyihiin Islaamka? | Somaliska
Waa maxay sababta ay SD u necebyihiin Islaamka?
Mid ka mid ah cunsuriyiinta ugu magaca dheer xisbiga Sverige Demokraterna (SD) ayaa wareysi uu siiyay websiteyada ku hala afka cunsuriyiinta waxa uu kaga hadlay naceybka uu u qabo Islaamka.
Kent Ekeroth waxa uu ka midyahay xildhibaanada baarlamaanka Sweden ku matala xisbiga SD, waxa uu ka midyahay kuwa ugu magaca dheer ee caadada iyo siyaasada ka dhigtay naceybka Muslimiinta iyo diinta Islaamka. Ekeroth ayaa inta badan doodaha ka dhaca baarlamaanka Sweden kaga hadla qataraha Islaamka iyo sida looga hortagi karo in la joojiyo waxa uu ugu yeero “Islaamaynta Sweden”.
Wareysiga uu bixiyay ayaa su’aasha ugu horeysa ee la waydiiyay ahayd sababta uu u bilaabay naceybka Muslimiinta iyo Islaamka. Isagoo uga jawaabay in markii da’diisu ahayd 7 -8 sano uu iskuulka ku arki jiray sida ardada Muslimiinta ah ay u dhib badanyihiin. Waxa uu sheegay in dabeecadooda ku dhisan dagaalka ay ku dhalisay in uu ka soo horjeesto. Ka dibna waxa uu sheegay in waxyaabaha uu ka arkay warbaahinta ee ka dhacaya wadamada Muslimiinta ay u xaqiijisay in Islaamku uu yahay qatar ku soo wajahan Yurub iyo Sweden.
Wiilkaan da’da yar ayaa u muuqda mid aan wax badan kala socon diinta Islaamka isaga oo marar badan isku qasaya farqiga u dhexeeya Islaamka iyo dhaqamada wadamada kala duwan. Mar la waydiiyay sababta ka dambeysa qatarta Islaamka ayuu ku jawaabay “Dhaqanka carabta” taasoo kuu muujineysa in uusan wax badan kala socon Islaamka. Si kastaba ha ahaatee waa nin ay ka go’antahay in uu magac ku helo naceybka iyo faafinta borobogaandada ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta.
Waxa uu aaminsanyahay in Muslimiinta Sweden ku dhaqan ay yihiin kuwo qatar ku ah wadanka oo aysan macquul ahayn in ay bulshada dhex galaan. Waxa uu marar badan ku celiyay in kufsiga, dhaca iyo dilka ay ka dambeeyaan Muslimiinta. Waxa kale oo uu aaminsanyahay in lacago badan ay Sweden uga qasaarto Muslimiinta.
Mar wax laga waydiiyay awooda iyo saameynta xisbigiisa ayuu runta ka sheegay in xisbigiisu uusan wax saameyn weyn ah lahayn isla markaana ay ka soo horjeedaan inta badan saxaafada Sweden. Waxa uu ku cataabay in ay mudo dheer qaadatay in ay baarlamaanka soo galaan, hadana uusan filayn in si degdeg ah ay u kobcaan.
Denmark oo hor istaagtay qaxooti ku soo wajahan Sweden
Maxkamada Sare oo go’aan ka soo saartay lacagta telefishinka
Soomaalida oo loo qabanayo kulamo ku saabsan sida ay u dalban karaan lacagta horumarinta Somalia
May 8, 2012 at 10:33
asigey uu taaaaala haduu neceb yahaay islamkaa allaa uu maqaan islaamka lkin wuuxuu ogadaa in uu nacebkisa iyo xiisbagaa uu shegayoo uu ismka wax kaa tareyn galkaan fuutadad caad
waa yaab balaayo qaabdaran isagoo nucaas ah uu muslim wax ka shegayaa afkiisa uraayo wax maka qadikaro muslimiinta naceeb uu nacebyahayna wax mauga qaadiro aay qaabdaran badan
Lacanada alle haku dhacdo galka xun islamka wa aman kufsi dhac dil iyo ben ah bo gala lagu ogyahay iyo dulmi waxad na ku ogatan ciraq afganistan somalia phalsdin iyo wadama kale o islam ah dulmi aye ku hayan galalada bas bakhti allaha duleyee
Waxan annigu u arkaa inuu cadeystay nacaybkiisa balse ay jiraan kuwa asaga la fekera amaba ka daran oo afka uun nooga qosla hoostana sun nooga walaaqa sida kuwa kala geeyay qoysas badan iyagoo dimoqraadiyad been ugu sheekeeyay iyo kuwa caruurteena maalin walba sabab la’aanta u kaxaysta. Nacaybkoodana waxan uga gudbi karnaa annagoo isku xirnaana oo is kaalmeysana dhammaan dadyowga dunida Muslimka. Waana inaan noqonaa dad ku dhegan Diintooda iyo dhaqankoodaba ee anan noqon DAMEERI DHAAN RAACDAY.
Nasri xaji says:
Walalayalow akhriya ayadahan koowniga ah kadib ha noo fasiro mid ilaah ajir iyo xasanaad kasiyo,Wadduu ma canitum qadbadatil baqda’u min afwaahihim wama tukhfisuduurikum akbar.qadbayanaa lakumul aayaat inkuntum tacqiluun,ha ulaa’i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum wa tuminuna bilkitaabi kulih.wa ida laqukum qaalu amanaa.wa idalow cadu calaykumul anaamila minalqaydi.qul muutu biqaydikum.inallaah calimun bithaati suduri,intam saskum xasanatun tasu’kum wa intusibkum sayyi’tu yafraxu biha.wa intasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay’aa.inallah bima tacmaluuna muxiid,
Soomaalida HADUU BARAN LAHAA..WUU KASII DARI LAHAA NACAYBKIISA..DHAQAN XUMIDOODA. JAHLIGA KU DHISAN..
May 8, 2012 at 18:27
asc aniga waxan dhihilahaa aan u duceyno in uu alle xaqa fahamsiyo maxa yelay haduu ogaan lahaa qiimaha islamka sidan uma hadleen walalkeyna Kent Ekeroth maxa yelay rak asaga ka daran ayaa adunka so maray wayna ahnuuneen asga wadada xaqa alaha u furo aminnnnnnnnnnnnnn yaa nan caarin jzkl ikhwani
asc asxaabta dhamaan waxaan maqlay in ey bilaawn magareshinka dhacaan iyo intar fiyuuga afka waxaa shalay lagasoqaday yar dagan tuulo udhow yatabori
oo magaceda layirahdo taroheter: waxan lagu dhahay lambarkaan cidaada udir sida ey ula tagaan safaarada oo dhacaanka laaga qaado marka waxan kacod sanayaa in jimcaale laxariiro yarkaas oo faafaadhin badan naaga keeno yarkaas wan idhiin salaamay asxaabta dhaman asx
dhulka allaha kula jaro duli
iftin c/laahi says:
May 9, 2012 at 00:59
waxii lunsan alle ha hanuuniyo oo asagu uhoreeyo anagana xariga islaamka alle hanoo xoojiyo ninkaan ilama khaldana waa muwaadin wadankiisa jooga diintaana waxba kama oga allaah hanuuniyo islaamkuna habaar maqabee uduceeya ragii diintaan bilowgeedii naftakudhibay asaxabtii ayaa markii danbe difaacay bacdal kufri wabilaahi towfiiq
Hooyo somaliyee says:
May 9, 2012 at 18:49
Lacnatulaahi calayka.”Qul mooto biqaylikum” “Waxaad tiraahdaan caradaada kudhimo” waxaad caloosha kuhayso adaykudhibin insha,alaahna Jahanabaad galin! Aaaamiin.
May 10, 2012 at 09:02
alaha soo hanuuniyo islaamka wax kama yaqaan gaalkan galadii asaga kawaweyna ayaa islaamka wax kaqaadi waayi
asc walalayaal gaalada ayaa siyaasadooda waxaa ka mida in mid ku yiraahdo anigaa fiican midna ku necbado sida kan oo kale lkn waa siku mid oo midna islaamka raali ka noqon maayo oo ilaahay ayaa noo sheegay taaas murun kama taagna waa siyaasada gaalada waxaan iyo wax ka darnba haku kadsoomina qosolkooda bentaa ee ilaahay ka magan gala walaalayaal